Robert Lewandowski Storyhood Plus Xogta Warka Xogta Leh
Home CIYAARAHA CADAADADA EE EUROPEAN Robert Lewandowski Storyhood Plus Xogta Warka Xogta Leh
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'Nickname'; 'Lewy'. Sheekada Caruurnimada Robert Lewandowski iyo Xogta Aan Bixin Karin waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo dhacdooyin la taaban karo laga bilaabo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku lug leedahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo waxyaabo badan oo aan la aqoon oo ku saabsan isaga.
Haa, qof walba wuu ogyahay inuu goolal dhalin karo, laakiin taageerayaal yar ayaa ka fakaraya sheekadiisa taariikhda Robert Lewandowski kaasoo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Robert Lewandowski Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka:Nolosha Hore
Robert Lewandowski wuxuu ku dhashay August 21, 1988 ee Warsaw Capital of Poland by Krzysztof Lewandowski (aabaha) iyo Iwona Lewandowska (hooyo).
Waxa uu ku dhashay qoys ficil ah oo katirsan islaamka wuxuuna ku qaatay sanadihii ugu horreeyay noloshiisa carruurnimadiisa meel u dhow Leszno, Western Poland.
Robert Lewandowski Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka:Lagu dhajiyay inuu yahay cayaaryahan
Maaddaama Biotia ay ku dhejisay, Lewy waxaa loo qoondeeyay in uu noqdo ciyaaryahan ka soo jeeda maalintii uu ku dhashay. Just jecel Leroy Sane, wuxuu ku dhashay kubadda cagta. Sida caadiga ah, dhammaan xubnaha qoyska Robert Lewandowski waa xiddigo isboorti. Hooyadiis, Iwona wuxuu ahaa ciyaaryahankii naadiga ahaa ee kubadda cagta ee ugu fiicnaa horyaalka 'Sport Wars' Sport Wars ', halka aabbihiis, Krzysztof - oo ahaa garsoore hore - wuxuu ahaa ciyaaryahan guul ah oo ka yimid kooxda Hutnik Warsaw. Ma aha wax la yaab leh in tusaalooyin noocan oo kale ah ee labada dhinacba, wiil dhalinyaro ah, Robert uu raacay raadkii horayba uga carooday waalidkiis. Waxa uu isku dayay isboorti kala duwan, laakiin shaki la'aan wuxuu dareemay kubada cagtiisa cagtiisa, isagoo rikoodhka ku guuleystay isagoo caruur ah.
Robert Lewandowski Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka:Ka bilow Cagta
Aabihiis, isagoo ogaaday inuu jeclaan lahaa wiilkiisa, ayaa wiilkiisa yar yar u kaxaystay tababarka kooxda Partizant Leszno. Markii uu sagaal jir ahaa, wuxuu bilaabay tababarkiisa Varsovia Warsaw.
Qulqulka adag, ciid aan lahayn caleen caws, daruuro boodh ah oo xaddidaya muuqaalka, xannibyada gaboobay ee aan la daboolin ee daaqadaha aan la daboolin bedelkii bedelka qolalka - kuwani waa shuruudo tayo sare leh ee Robert Lewandowski uu bilaabay inuu soo baxo.
Lewandowski ayaa ka tagay Varsovia si uu ugu biiro kooxda heerka shanaad ee Delta Warsaw, taas oo si toos ah u iibisay Legia Warsaw. Halkaas ayuu ku sii socday ilaa nasiib darro dhacday.
Robert Lewandowski Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka:Musiibada
Aabaheed Krzysztof ayaa ku riyooday hal maalin inuu arko wiilkiisa oo u ciyaara kooxda ka Łazienkowska Street. Nasiib darro, sababtoo ah ciriiri darro ah oo qaddarin ah, xitaa ma uusan helin inuu arko wiilkiisii ​​ugu horeeyay ee wiilkiisa - wuxuu ku geeriyooday 2005.
Dhibaatada qoysku waxay ku qasbeen Robert in nin aad u goor hore. Henrikh Mkhitaryan sidoo kale wuxuu arkay marxalad la mid ah ka dib dhimashadii uu geeriyooday (aabaha).
Robert Lewandowski Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka:Qaadashada Tallaabooyinka Qabow
Inkastoo uu weli da 'yar yahay, isagoo doonaya inuu hoos u dhigo culayska dhaqaale ee hooyadiis, wuxuu go'aansaday inuu ka tago gurigiisa oo uu la guuray walaashiis magaalada Warsaw. Wuxuu maamulay wax kasta oo yar oo uu ku kasbaday kooxda kubada cagta ee Delta.
Ka dib ciyaaro wanaagsan oo goolal badan leh iyo afar gool oo uu dhaliyay, waxa uu ogaaday Legia Warsaw.
Robert Lewandowski Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka:Qaadashada Fall
XIDE 2005 / 2006 Lewandowski wuxuu ahaa ciyaaryahan sharci ah oo loogu talagalay qadarka afaraad ee lafdhabarta Polish-ka ah ee heshiis hal sano ah.
Ujeeddadiisu waxay ahayd inuu soo galo kooxda koowaad sida ugu dhakhsaha badan. Waxa uu soo bandhigay qaab ciyaareed wanaagsan oo ah ciyaaryahan muhim ah, taasoo ka careysiisay feejignaanta tababaraha iyo kubada cagta.
Weeraryahanka da'da yar ayaa xerada tababarka ku soo qaatay Wronki isagoo la jooga kooxda koowaad isagoo rajeynaya inuu qadariyo.
Nasiib darro, waxaa jiray nasiib xun. Young Lewy ayaa qaatay dayrta. Waxa uu ku soo kabsaday dhaawac cajiib ah horaantii xirfadiisa ciyaareed ee kooxda, waxaana uu awoodi waayay inuu muujiyo awoodiisa buuxda.
Bakayoko wuxuu ku dhibtooday waqtigaa oo kale ee xirfaddiisa dhalinyarada ah. Sida Lewy, ma jirin wax fursad ah inuu ku xisaabiyo inuu ku biiro horyaalka heerka sare ee Poland - Ekstraklasa. Nidaamyadii uu udubdhexaadinayey ee u baxsaday kooxaha kale ee hoose ayaa ku guuldareystay. Qofna ma doonaynin. Legia, halkii si lama filaan ah loola macaamiloonayo ama wax sharraxaad ah, ma aysan go'aansan in ay sii ballaariso qandaraaska Robert.
Bal eeg, xirfad gaaban oo waqti gaaban ah ayaa yimid xeryaha. Tani waxay ahayd riyadii aan fiicnayn ee Robert Lewandoski.
Robert Lewandowski Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka:Dib u soo Celinta Weyn
Ka dib markii uu diiday Legia, Robert ayaa ka tagay. Waxa uu ka tirsanaa naadi mana helin fursad tababar ah. Nasiib wanaag, waqtigiisii, hooyadiis waxay u timid inay samatabbixin sameyso dadaal kasta oo suurtagal ah si ay wiilkeeda u riyooto.
2006 xagaaga, dhalinyarada Lewy ayaa ka soo kabsaday dhaawaciisa. Waxa uu nasiib ku lahaa inuu jebiyo Znicz Pruszków kaasoo halis geliyay inkastoo warar sheegaya inuu weli dhaawac yahay.
Halkaas, Lewy wuxuu bilaabay inuu kor u kaco dhinaca kubada cagta. Wuxuu hogaaminayay kooxdiisii ​​si uu u guuleysto horyaalkii seddexaad ee Poland, ka dib markii uu dhaliyay gool shan iyo toban ah oo u hogaaminaya gooldhalinta horyaalka. Lewy ayaa ku guuleystay koobkii horyaalka ee horyaalka heerka 1- Wuxuu si dhakhso ah u bilaabay goolal ka sarreeya goolasha 20 xilli ciyaareedkii.
Wuxuu fursad u helay inuu dib ugu laabto kooxdiisii ​​hore ee Legia ka dib markii ay ka codsadeen cafis.
Mar labaad, ka dib markii uu soo bandhigay dalabyo dalab ah, islamarkaana uusan waligiisna dhameystirin wadahadalada, Lewandowski ayaa go'aansaday inuu u ciyaaro Borussia Dortmund, oo uu la saxiixday qandaraas afar sano ah.
Robert Lewandowski Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka:Abuuritaanka Fikradda Caalamiga ah
2011 / 2012 Xilliga Xilligaan wuxuu ahaa mid aad u wanaagsan. Hase yeeshee, ciyaartoy badan oo riyadoodu tahay mid xirfad leh ayaa jeclaan lahaa inay la kulmaan. Markii hore waxaa jiray calaamado muujinaya in mustaqbalkiisa Lewandowski ee Signal Iduna Park uu isbedelay. Xaaladda ayaa soo laabatay iyadoo uu dhaawac ka soo gaaray Lucas Barrios 'Copa America iyo Jurgen Klopp Lewandowski ayaa booskiisa buuxiyay.
Pole wuxuu isticmaalay fursadan sida ugu fiican ee uu awoodo. Iyadoo isaga, Dortmund marqaati ka ah isbeddel cajiib ah. Qofka oo si joogta ah u soo jiidanaya ayaa si lama filaan ah u rogay weerar weerarka koowaad ah oo leh dilka dilaaga. Tani waa sheekada Robert Lewandowski ee ku soo caan baxday inuu calaamad u yahay safarkiisa FC Bayern.
Inta kale ee ay sheegaan waa taariikh. In Lewy's erayada; "Waan jeclahay Kubadda cagta, waan jeclahay kaliya sababtoo ah waxay i siisaa nolosheyda. Ma jiraan wax dheeraad ah. "
Robert Lewandowski Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka:Nolosha Qoyska
Qoyska Robert Lewandowski waa qoys ka kooban kubadda cagta, kubadda laliska, farshaxanimada iyo xiddigaha judo. Hadaad ka bilowdo madax ka dambeeya qoyska.
GABAAN: Lewy waxa uu ku riyaaqay sannado badan oo xiriir la leh aabihiis markii uu noolaa. Marka laga reebo in uu baro jimicsiga lagama maarmaanka ah ee kubadda cagta, Krzysztof sidoo kale wuxuu helaa wakhti uu ku ciyaaro ciyaaraha gacmaha ee Lewy.
Wiil dhalinyaro ah Robert Lewandowski iyo Aabbaha Krzysztof
Qof kasta ayaa indhihiisa ku jiray, oo uu ku jiro walaashii Lewy, Milena Lewandowski. Waxay labadaba u qaadan lahaayeen inay ku seexdaan gacmahooda oo ay daawadaan barnaamijkooda barnaamijka carruurta ee ugu xiisaha badan. Nasiib daro way nasiib darro ahayd markii ay carruurtu ku waayeen.
Robert Lewandowski oo dhalay aabe Krzysztof iyo walaashiis - Milena
HOOYO: Iwona Lewandowska waa Robert Lewandowski hooyadii. Labada dhinacba waxay wadaagaan xiriir wanaagsan.
Robert Lewandowski oo qaadatay toogasho hooyadeed- Iwona
Waxaa la ogyahay in ay tahay qof ku qasba Robert in uu si dhakhso ah u geeriyoodo kadibna uu dibiga u geeriyoodo kadib markii uu geeriyooday. Shaki kuma jiro, Robert wuxuu uqalmaa inuu aabihiis daaha ka qaaday inuu aasaas u noqdo xirfadiisa. Wuxuu uqalmaa hooyadiis inay la socoto dhammaan waqtiyada wanaagsan iyo xun (luminta aabbihiis iyo dhaawaca hore).
Iyadoo la sheegayo geerida ninkeeda, Iwona mar ay tiri; "Nasiib wanaag, xilligaan dhacay, Robert ma uusan joogin guriga. Krzysztof ayaa la halgamay kansarka, hal habeenna wuxuu ku dhacay istaroog kale, anigana nama dhex aheyn subaxnimadii xigtay. Robert wuxuu markaas ku noolaa walaashiisii ​​weynaa ee Bielany. Waxaan u sheegay wax kasta oo ka dambeeya fasalka. Waxa uu ka jawaabay in uu dareemay. Waxa uu ahaa mid geesinimo leh sida yar kaqoonsi." ayuu yidhi Mrs Iwona.
Xitaa sida nin qoyska ah, Lewy weli wakhti tayo leh ayay ku qaadataa inuu la qaato hooyadiis Iwona. Wuxuu ku dhaartaa marnaba in uu dareemo cidlo ka dib markii uu ka tagay aabihii.
Robert Lewandowski Hooyo- Iwona
KALSOON: Milena Lewandowski waa walaashii Robert Lewandoski. Waxay ku jirtay Lewy markii uu marayay waqtiyo adag markii ay labada carruurba ahaayeen. Waxay tahay ciyaaryahan xirfadle ah oo kubada cagta ah oo wakiil ka ahaa waddankeeda sanadka. Waxay ka fiicantahay kubadda laliska inta ay walaalkeed ku fiican tahay kubada cagta.
Milena waxay qabatay hooyadeed, Owona oo ahaa ciyaaryahankii hore ee xirfadlayaasha kubadda cagta.
Robert Lewandowski walaashii Milena
GRANDMOTHER: Walaashii Lewy ayaa ku dhintay da 'da sano ee 91. Hoos waxaa ku yaal iyada iyo Milena Lewandowski.
Robert Lewandowski's ayeeyo
Robert Lewandowski Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka:Nolosha Xiriirka
Robert Lewandowski xaaskiisa waa Anna Lewandowska. Waxay tahay isboortis reer Poland ah, oo ka qalinjabiyey Academy of Physical Education ee Warsaw. Waxay sidoo kale waa takhasus ku saabsan nafaqada, karatee iyo ugu dambeyn, wakiil ka mid ah Poland ee karatee dhaqameed sida wakhtiga qorista. Labada labadoodba waxay arooskooda ku jireen 2013 kaasoo ahaa sanadkiisii ​​ugu dambeeyay.
Jacaylka Robert Lewandowski ee Nolosha
Lewy's jaceylka Anna waxaa loo aqoonsan yahay waana ku qanacsan yahay raali gelinta qaar badan oo ka mid ah taageerayaashiisa iyo xitaa ciyaartoyda kubada cagta Marcus Rashford, Roberto Firmino iyo Juan Mata kuwaas oo loo yaqaan in ay leeyihiin cilaaqaad aad u wanaagsan. Lewy iyo Anna labadaba marwalba waa la arki doonaa.
Robert Lewandowski iyo xaaskiisa- Anna ayaa leh waqti fiican
Waa arrin ku xiran tahay in gabadha Robert Lewandowski xaaskiisa Anna Lewandowski ay haysato bilad dahab ah oo ku jirta qeybta karate ee 2009 World Championships.
Robert Lewandowski xaaskiisa, Anna- Waa suun madow
Robert Lewandowski oo ka tirsanaa 7th December, 2016 wuxuu ku dhawaaqay in xaaskiisu ay uur leedahay 'caloosha uurka' Dabaaldegga goolka.
Ninka hore ee Polish ayaa dareemay 'cajiib' ka dib markii uu sawiro sawir ah ka helay isaga iyo gabadhiisa dhashay Klara.
Robert Lewandowski Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka:La xiriira Hitler
Robert Lewandowski wuxuu ahaa gabadhii Hitler ee ugu da'da yar ee loo yaqaan Pawla Hitler. Waxay ku dhimatay sannadka 1960.
Robert Lewandowski xiriirka Hitler
Robert Lewandowski Sheeko dhalinyaro sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka:Baaskiilada Man
Robert Lewandowski waa baaskiilad dhameystiran iyo mootada! Inkasta oo uu xirfad ciyaareed kubbada cagta ah, Lewa ma uusan lumin mowjada mootada waxaana uu ka badbaaday shilalka kala duwan ee sanadihii ugu dambeeyay ee 10.
Waxa uu ka maqnaa marxaladdii seddex bilood ka dib markii uu shil uu ku socday isagoo wata baaskiilkiisa. Isaga hadda waa ka taxaddar in hore. Tani waa halka aan ku dhameyneyno Robert Lewandowski's Life Story.
Wareysiga Kubadda cagta ee Booliska
Sheekada Carcel Marcel Sabitzer Plus Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Josip Ilicic Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Krzysztof Piatek Sheekaysiga Carruurnimada iyo Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Erling Braland Haaland iyo Xaqiiqda Taariikh Nololeed ee Untold
Sheekada Carruurnimada Teemu Pukki Plus Xaqiiqooyinka Taariikh Nololeed ee Untold
Sebastien Haller Storyhood Sheeko Xogta Warka Xogta Leh
Joel Matip Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Gylfi Sigurdsson Sheeko dhalasho sheeko xambaarsan Xaqiiqooyinka sawir la'aanta
Taariikhda wax laga beddelay: Febraayo 17, 2018